2 Beresosɛm 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Beresosɛm Nhoma a Ɛto So Abien 17:1-19
Yuda hene Yehosafat ahenni (1-6)
Wokokyinkyin ɔman no mu kyerɛkyerɛe (7-9)
Yehosafat asraafo bɛyɛɛ den (10-19)
17 Ne ba Yehosafat+ bedii n’ade, na ɔhyɛɛ ne tumi den wɔ Israel so. 2 Ɔde akofo gyinagyinaa Yuda nkurow a ɛyɛ den nyinaa mu, na ɔde asraafodɔm koguu Yuda asaase ne Efraim nkurow a ne papa Asa ko fae no mu.+ 3 Yehowa dii Yehosafat akyi, efisɛ ɔnantew ne nana Dawid akwan so+ na wankodi Baal akyi. 4 Ɔhwehwɛɛ Onyankopɔn a ne papa som no no,+ na odii ne mmara nsɛm so;* wamfa Israel akwan so.+ 5 Yehowa maa ahenni no timii ne nsam,+ na Yuda nyinaa de akyɛde brɛɛ Yehosafat daa; enti onyaa ahonyade ne anuonyam pii.+ 6 Onyaa akokoduru* de nantew Yehowa akwan so, ma enti oyiyii sorɔnsorɔmmea*+ ne abosonnua*+ a ɛwɔ Yuda no. 7 N’ahenni afe a ɛto so abiɛsa mu no, ɔsoma kɔka kyerɛɛ ne mpanyimfo sɛ wɔnkɔkyerɛkyerɛ wɔ Yuda nkurow mu; mpanyimfo no ne Ben-Hail, Obadia, Sakaria, Netanel ne Mikaia. 8 Lewifo yi na na wɔka wɔn ho: Semaia, Netania, Sebadia, Asahel, Semiramot, Yehonatan, Adoniya, Tobiya ne Tob-Adoniya. Ná Elisama ne Yehoram a wɔyɛ asɔfo no nso ka wɔn ho.+ 9 Wɔfaa Yehowa Mmara nhoma no,+ na wosiim kɔkyerɛkyerɛe wɔ Yuda; wokyinii Yuda nkurow nyinaa mu kyerɛkyerɛɛ ɔman no. 10 Na Yehowa ho hu tɔɔ nsaase no so ahenni a atwa Yuda ho ahyia nyinaa so, na wɔne Yehosafat anko. 11 Filistifo de akyɛde brɛɛ Yehosafat, na wɔde sika betuaa tow maa no. Arabiafo nso de nyɛmmoa brɛɛ no; ná wɔyɛ adwennini 7,700 ne mpapo 7,700. 12 Yehosafat nyaa tumi kɛse paa,+ na ɔkyekyee nkurow a ɛyɛ den+ ne adekora nkurow+ wɔ Yuda. 13 Ɔyeyɛɛ nneɛma pii wɔ Yuda nkurow mu, na onyaa asraafo, kyerɛ sɛ, mmarima akatakyi wɔ Yerusalem. 14 Wɔhyehyɛɛ wɔn sɛnea wɔn agyanom abusuafi te: Yuda apem apem so mpanyimfo, Adnah na na ɔda wɔn ano, na na mmarima akatakyi 300,000 ka ne ho.+ 15 Nea na ɔhyɛ n’ase ne ɔsahene Yehohanan, na na mmarima 280,000 ka ne ho. 16 Nea na ɔhyɛ ɔno nso ase ne Sikri ba Amasiya a otuu ne ho maa Yehowa som adwuma, na na mmarima akatakyi 200,000 ka ne ho. 17 Nea ofi Benyamin+ mu nso ne ɔkatakyi Eliada, na na mmarima 200,000 a wokurakura agyan ne akyɛm ka ne ho.+ 18 Nea na ɔhyɛ n’ase ne Yehosabad, na na mmarima 180,000 a wɔasiesie wɔn ho ama sraadi ka ne ho. 19 Eyinom ne wɔn a na wɔsom ɔhene; ɛsono wɔn a ɔhene de wɔn totoo nkurow a wɔabɔ ho ban ano wɔ Yuda nyinaa no.+
^ Nt., “ɔnantew ne mmara nsɛm mu.”
^ Nt., “Ne koma nyaa akokoduru.”
2 Beresosɛm 17